Baro Sida Loo Sameeyo Khadka Ganacsiga ee Shirkaddaada
Shirkadaha Incorporated waxay bixiyaan barnaamijyo badan oo lagu dhisayo amaahda shirkadaha. Waxaan ku siin karnaa dariiqa aad ku kala sooci karto amaahdaada shaqsiyadeed meheraddaada. Iyada oo loo marayo geedi socodkayaga qaaska ah, waxaan isku uruurineynaa sannadihii caadiga ahaa ee "4-6" si loo aasaaso ganacsi loona helo dhibcaha hoos ilaa 7 ilaa 14 maalmood, abuurista astaan ​​cusub oo sumcad oo ku saleysan lambarkaaga Aqoonsiga Canshuurahaaga iyo karti u lahaanshaha.
Haddii aad u baahatid $ 20,000 illaa $ 400,000 ama ka badan oo kredit ah, wac ama buuxi foomka dhanka midig.
Dammaanadkeenna: Haddii aad raacdid barnaamijkeena oo aan kugu siino inaad ku darsato wax qiime ah kuma kici doono boqolkiiba.
U wac 1-888-444-4812 wixii faahfaahin ah
Intaa waxaa dheer, oo leh a Taxanaha LLC, mid ayaa yeelan kara hal shirkad taxane kastaa wuxuu abuuri karaa astaan ​​u gooni ah deynta. Tani waxay ku dhufan kartaa xaddiga deynta ee laga yaabo inay ku hesho tirada taxanaha mid ka mid ah uu doorto inuu abuuro.
Iyada oo jawiga maal-gashi ee hadda aan haysanno barnaamijyo loogu talagalay kuwa haysta dhibco FICO wax ka yar 640. Shakhsiyaadkaas, weydii wax ku saabsan barnaamijka dayactirka deynta.
Waad u abuuri kartaa astaantaada oo adiga ayaa laguugu abuuri karaa aalad iyo ilo aad si dhakhso leh ugu aasaasi karto dhibcaha ganacsiga - ama ha noo yeelo inaan kuu qabanno shaqada oo dhan. Waxaan bixinaa barnaamij ah "95% gacan-ka-bax," oo u oggolaanaya khubarada deynta shirkadaha inay qabtaan shaqada. Eeg Dhammaan Barnaamijyada Deynta Shirkadaha
Qaado dhibco shirkadeed - Kala saaridda sumcaddaada ganacsi ee shaqsiyadeed waxay bixin kartaa waxtarrada soo socda:
Shuruudaha Bixinta Kafiican (Net 30 ama Net 60)
Kaararka amaahda ganacsiga
Kiraystaha gawaarida iyadoon la socon dammaanad qaadka ama hubinta amaahda shakhsiga
Bilaabida ganacsiga iyo raasamaal kobaca
Qiimo jaban, soo celin sare
Mar alla marka aad aasaasto shirkada amaahda waxaa suurtagal ah in la helo:
Khadadka amaahda & Shuruudaha Bixinta Ka Fiican (Net 30 ama Net 60)
Qiimaha Danbe Yar
Goorma La Sameeyaa Deynta Ganacsiga
Qaanso iyo fudud, waxaad rabtaa inaad dhisaan amaah ganacsi ka hor inta aysan shirkaddaadu u baahnayn! Hay'ad ma doonayso inay wax amaahato, la shuraakooto, ama ku aamiso shirkad aan caddayn karin xasilloonideeda dhaqaale. Markaad tahay milkiile ganacsi waa inaad bilawdaa inaad ka fekerto dhisida taariikhda amaahda isla markaaba. Tan waxaad ku sameyn kartaa adoo qaata Lambarkaaga D&B DUNS Number. Hawshani waa suurtagal, si fudud waxaa lala yeelanayaa Shirkad ama Shirkad Xil ka Saarid Xadidan (LLC), iyo adeegsiga nambarkaaga aqoonsiga canshuurta (EIN).
Marka saraakiisha iyo milkiileyaashu u isticmaalaan astaantooda asturnaanta shaqsiyadeed si ay u helaan maah ama ay u helaan kaararka deynta ee ganacsiga, waxay halis ugu jiraan fursadda qaan-shaqsiyeed, waxayna daciifinayaan xijaabka shirkadda iyagoo isku daraya macaamil ganacsi. Waxaa jira laba sababood oo milkiileyaasha ganacsigu ay tahay inaysan isku dayin inaysan u isticmaalin dammaanad shaqsi xaaladdan.
Qofka wax saxeexa ah ayaa mas'uul ka ah haddii ganacsigu uusan bixin karin lacagahaas
Dhibcaha laga helo ganacsiga waxay sababi kartaa in la qabto hanti shaqsiyadeed.
Maskaxda ku hay, Qiimaynta amaahda ganacsiga waxaa loo soo uruuriyaa si la mid ah dhibcaha amaahda shaqsiyadeed. Waxaa loo abuuray iyadoo la adeegsanayo dhowr arrimood, ay ka mid yihiin: dhibcaha la heli karo, xaddiga amaahda la heli karo, taariikhda bixinta, taariikhda socodka lacagta, iyo tilmaamayaal kaloo badan oo maaliyadeed.
Helitaanka khadadka dhibcaha ganacsiga waa geedi socod loo dejiyay waqti ka dib. Meheradda markay sii weynaato, fursadaha badan ee ay yeelan doonaan ayaa ah inay dhisaan amaahda oo ay amaah ku helaan iyada oo aan loo adeegsan dammaanad qaad shaqsiyeed. Da'du waxay u oggolaaneysaa ganacsato badan inay muujiyaan kalsoonidooda iyo xasilloonida dhaqaale, laakiin tani waa inaysan ka hor istaagin ganacsatada da'da yar inay isku dayaan inay dalbadaan khadadka amaahda. Sida ugu wanaagsan ee ganacsigu u muujin karo kalsoonidooda waa adoo xoojinaya warbixintooda amaahda D&B.
Dhis amaahda shirkadaha
Shirkadaha Incorporated waxay soo saareen barnaamij ay ku siinayaan meheraddaada aalado kaa caawinaya inaad kala goyso meheraddaada iyo dhaqaalahaaga shaqsiyeed. Kaliya iyada oo la abuurayo astaan ​​cusub oo amaah ah oo ku saleysan Lambarkaaga Aqoonsiga Canshuuraha.
Waxay ku bilaabmaysaa annaga Barnaamijka Dhismaha Amaah, kaas oo dhisi doona astaan ​​sumcad cusub iyo dhibco. Hadafku waa in la dhiso buundooyinka sumcadda shirkadaha ee 75 ama ka sii fiican. Marka la barbardhigo dhibcaha 80 waxay la mid tahay inaad haysato dhibco deyn shaqsiyeed 800: Taasi waa amaah fiican. Waxaan soo aruurinay oo aan diyaarinay, nidaamyada dhibcaha dhibcaha ee wakaaladaha warbixinta koowaad.
Dhibcaha dhibcaha waxaa lagu dhisayaa lahaanshaha khadadka amaahda, kaararka deynta, xisaabaadka iyo tixraacyada ganacsiga ee ka warbixiya xafiisyada sumcadda meheradda. Ganacsiyada badankood way adag tahay in la helo amaahiye raba inuu bixiyo noocyada ugu badan ee amaahda shirkadaha iyada oo aan lahayn dammaanad shaqsiyeed iyada oo aan lahayn taariikhdii hore ee amaahda ganacsiga. Haddii aad leedahay tixraacyo ganacsi oo kuu gaar ah, waan kala shaqeyn doonnaa iyaga si aan u dhisno dhibcaha. Si kastaba ha noqotee ganacsiyada badankood waxay u baahan yihiin tixraacyo ganacsi oo dheeri ah kuwaas oo ku wargeliya hay'adaha deynta oo furi doona khadadka amaahda oo bilaabi doona inay u wargeliyaan hay'adaha waaweyn. In kasta oo howshu sida caadiga ah ay qaadato waqtiga kor lagu soo sheegay, marmarka qaarkood afar ilaa lix bilood ayaa looga baahan yahay iibiyaasha in ay si sax ah u caddeeyaan hay'adda soo tabineysa.
Waxaan ku siinnaa talobixin ku saabsan sida loo xusho shirkadaha ku siin kara meheraddaada deyn deg deg ah. Qeyb ka mid ah barnaamijka ayaa kaa caawineysa arjiga oo dhan iyo nidaamka warbixinta iyo sidoo kale xulashada meheradaha sumcadda siin doona shirkaddaada. Shirkadaha aan la shaqeyno waxay u soo sheegi doonaan khibradaha lacag bixinta xafiiska amaahda - waxayna ku siin doonaan amaahda bilaa damaanad shaqsiyeed ama baahida loo qabo hubinta amaahda shaqsiga.
Shirkaduhu waxay diyaar u yihiin inay soo saaraan dhibcaha maxaa yeelay macaamiishooda looma tixgelin inay yihiin halis sare. Sababta aan loogu tixgelin inay yihiin halis sare waa sababta oo ah milkiileyaasha ganacsigu waxay rabaan inay dhisaan sumcadooda ganacsigooda iyagoo maalgashanaya barnaamijka dhisida amaahda shirkadaha.
Waxaan xubin ka nahay Dun & Bradstreet Credibility Corp.
Barnaamijyada Deynta Shirkadeed
Samaynta Awoodda Shirkadeed ee Ganacsigaaga
Samee Naftaada Shirkad Deyn Ku Leh
Meelmarinta Dhibcaha Ganacsiga
Shirkadaha Da'da ah ee Da 'yareyda ah oo ay la socoto Shirkadda Deynta
Deynta Shirkadaha iyo Hay'adaha Shirkadaha
Dhibcaha Darajada Shirkadaha
Profile-ka Dunida iyo Bradstreet
Astaanta Astaanta Deynta
Profile Kreditkole Khibradeed
Shirkadaha Shell-ka Dadweynaha Oo Iibinaya
U adeegsiga Barnaamijka Caawinaada Maalgelinta Dhismooyinka Daynta Guryaha Da'da ah
Aqoonsigaaga Aqoonsiga Meheraddaada
Tusmooyinka Amaahda Ganacsiga